Dhijitari Kushambadzira ingangove iri yepamusoro midhiya kushambadzira mari muna 2016 maererano comScore. Izvo zviri zvakare kuzviita iyo isingadzivisike chinangwa chekubiridzira kubiridzira. Muchokwadi, sekureva kweshumo nyowani pamusoro pehunyengeri muindastiri yekushambadzira indasitiri, chetatu chezvinhu zvese zvekushambadzira zvichaparadzwa nekubiridzira.
Zvinoda Kujeka - Kana wako agency kana vashambadziro vevashambadzi vasingakwanise kukuratidzira iko kushambadza kwega kwega
Mhoroi Douglas- chinyorwa chinobata zvakanaka nyaya yekubiridzira, asi haipe mhinduro chaiyo, sezvo kubiridzira kwekudzvanya kungasagaro kuitiswa bot traffic. Pfungwa ingave yekuchenjerera zvakanyanya nemaseting ane chekuita negeo kunangwa (senge ari pasi pe +Dzidzo dzepamusoro). Zvakare, kushandisa yakatsaurirwa software, senge http://www.xionagrup.ro chingava pfungwa yakanaka, kana kushandisa matanda parsers kuona kuti maIPs kana makirasi arikudzvanya pane ako ads.